Ungakhubaza Kanjani Ukuthola i-iPhone Yami - ZONKE Izindlela Ezinokwenzeka | Izindaba ze-IPhone
U-Ignacio Sala | | iOS, Okokufundisa namanyuwali
Ukulahlekelwa yi-iPhone yethu kuyinto embi kakhulu engenzeka kithina namhlanje, kubasebenzisi abaningi, ngisho nangaphezu kwesikhwama semali, ngoba akuyona nje indaba yenani lezomnotho, kepha eminyakeni yamuva isibe yidivayisi equkethe imininingwane eminingi mayelana nathi, ngokusebenzisa izinhlelo ezahlukahlukene ezithi sivumele ukuphatha ngasese idatha kuma-akhawunti ethu asebhange, amakhadi esikweletu, amaphasiwedi, omazisi ...
Ngenkathi i-iPhone iqala ukuba yidivayisi ehlobene nesimo sabantu ababenayo, ukwebiwa kwale divayisi kwakuyinto ephambili kubangani babanye, ngokuba yithuluzi elantshontshwa kakhulu e-United States. Ukuvimbela amasela ekuthengiseni amadivayisi entshontshiwe ukuze athengiswe kabusha, i-Apple yakhipha isici esithi Thola i-iPhone Yami phezulu emkhonweni wayo, isici esivumela kude cisha i-iPhone yethu ukuze isetshenziswe futhi ngaphandle uma sinephasiwedi ye-akhawunti ehlotshaniswa nayo.
Ngokuthola umsebenzi wami we-iPhone, singazi ngaso sonke isikhathi, okuyindawo yedivayisi yethu, kufaka phakathi isikhathi sakho sokugcina lapho unoxhumano lwe-inthanethi, umsebenzi ofanele uma sesilahlekile noma sesikukhohliwe ndawana thile futhi ibhethri lalo beselizophela.
Kepha ngaphezu kwalokho, singathumela futhi umsindo kuleyo divayisi, umsebenzi ofanele uma siyilahlekele ekhaya, phakathi kwamakhushini kasofa, ikhamera noma ikamelo kodwa asikwazi ukuwuthola. Kepha umsebenzi obaluleke kakhulu lo msebenzi osinikeza wona kungenzeka ukuthi uvimbe idivayisi ukude ukuze kungabikho muntu ongafinyelela esigungwini sethu noma ngabe uyayazi ikhodi yokuvula yalo.
Inketho yokuvimba okukude futhi isivumela ukuthi sikhombise umyalezo ku-terminal uma sesivimbile ukuze kuthi uma kwenzeka ukulahleka kwangempela kwesiginali, umSamariya olungile owamthola ungaxhumana nathi ukuze usibuyisele kithi.
1 Kungani kungelona isu elihle ukukhubaza i-Find My iPhone
2 Kungani kufanele ngiyikhubaze?
3 Ungakhubaza kanjani ukuthola i-iPhone yami kusuka ku-iPhone
4 Khubaza ukuthola i-iPhone yami uma ingavuli
5 Khubaza ukuthola i-iPhone yami kusuka ku-Windows noma ku-Mac
6 Khubaza ukuthola i-iPhone yami ukuze uyilungise
7 Khubaza ukuthola i-iPhone yami ngaphandle kwephasiwedi
8 Khubaza ukuthola i-iPhone yami kusuka ku-iCloud
Kungani kungelona isu elihle ukukhubaza i-Find My iPhone
Ukwenza kungasebenzi ukusebenza kwe-Find my iPhone akunconyiwe, ngaphandle kwalapho sizothengisa khona idivayisi, sizoyibona esigabeni esilandelayo. Lo msebenzi usivumela ngaso sonke isikhathi ukuthi sikwazi ukulawula idivayisi yethu, ukulawula ngalo singakuvimba ngokuphelele, khombisa umyalezo esikrinini nenombolo yethu yocingo ukuze usibuyisele wona, susa konke okuqukethwe ngaphezu kokukuthola, kufaka phakathi indawo yokugcina ngaphambi kokuthi ishiywe ngaphandle koxhumano lwe-Intanethi.
Kungani kufanele ngiyikhubaze?
Ukuphela kwesizathu sokukwazi ukuvimba usesho lwe-iPhone yami kuphela futhi kuphela lapho kufanele sibuyisele idivayisi lapho sizoqhubeka nokuyithengisa, ukuze ingasaphatheki ne-ID yethu ye-Apple. Kulezi zimo, kuzoba yidivayisi uqobo noma uhlelo lokusebenza lwe-iTunes Izosicela ukuthi siyivimbele uma sifuna ukuyibuyisa kusuka ekuqaleni.
Ungakhubaza kanjani ukuthola i-iPhone yami kusuka ku-iPhone
Indlela esheshayo yokukhubaza i-Find My iPhone ihlala ngokusebenzisa idivayisi, kungaba i-iPhone, i-iPad, noma i-iPod touch. Ukwenza lokhu, siya kwimenyu yezilungiselelo, chofoza kumsebenzisi wethu bese uchofoza ku-iCloud. Isikrini esilandelayo sizokhombisa zonke izinsiza ze-iCloud esizisebenzisile kudivayisi yethu. Kumele siye ku-Thola i-iPhone yami futhi hambisa iswishi kwesobunxele ukuyenza ingasebenzi.
Ngaleso sikhathi i-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch izosibuza, yebo noma yebo, iphasiwedi ye-akhawunti yethu ye-iCloud, ngaphandle kwalokho ngeke sikwazi ukwenza insiza yendawo ye-iCloud isebenze, ngakho-ke kufanele ube ne-password oseduze nayo.
Khubaza ukuthola i-iPhone yami uma ingavuli
Uma i-iPhone yethu imise ngokuphelele ukusebenza futhi ayikho indlela yokuyifinyelela, ngaphambi kokuyiyisa kwinsizakalo yezobuchwepheshe, kufanele sisebenzise i-Find my iPhone option. Ukuze ukwazi ukukwenza, Kufanele singene ngewebhusayithi icloud.com.
Lapho sesifakile imininingwane ye-Apple ID yethu, chofoza ku-Search option, bese ukhetha idivaysi esifuna ukucisha kuyo umsebenzi we-Find my iPhone. Ngokulandelayo siya engxenyeni engenhla kwesokudla kwesikrini, lapho kukhonjiswa khona igama lethu, chofoza okwehliswayo bese uchofoza Izilungiselelo ze-iCloud.
Chofoza kudivayisi esifuna ukukwenza kungasebenzi ukusebenza kwe-Find my iPhone bese chofoza ku-x kuboniswe ngakwesokudla sayo. Iwebhu ngeke icele ukuqinisekiswa nokuthi siphinde sifake iphasiwedi yedivayisi yethu. Lapho inqubo isiqedile, isici sokuthola i-iPhone Yami sesizokhubazwa.
Khubaza ukuthola i-iPhone yami kusuka ku-Windows noma ku-Mac
I-Apple ayisiniki noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukwenza kungasebenzi ukusebenza kwe-Find my iPhone, iPad noma iPod ngqo kusuka kudeskithophu noma kwi-laptop yethu, ngakho-ke kufanele sikwenze ngeICloud.com wenza izinyathelo ezifanayo engikukhombise kona esigabeni esedlule.
Khubaza ukuthola i-iPhone yami ukuze uyilungise
Uma ngabe idivaysi yethu inenkinga, engaphandle nengaphakathi, kungaba yisikrini sayo noma ingxenye ngaphakathi, isinyathelo sokuqala okufanele sisenze njalo ukucisha umsebenzi we-Find my iPhone. Le nqubo iyadingeka futhi iyadingeka I-Apple ingashintsha noma iyiphi ingxenye yomkhiqizo futhi kamuva uqinisekise ukuthi iyasebenza lapho inkinga isixazululiwe. Uma sikwazi ukufinyelela kudivayisi siqhubeka njengasesigabeni Yenza kungasebenzi i-iPhone yami ku-iPhone. Kepha uma singakwazi ukuyivula, singakwenza ngeICloud.com futhi njengoba ngichazile esigabeni Khubaza ukuthola i-iPhone yami uma ingavuli.
Khubaza ukuthola i-iPhone yami ngaphandle kwephasiwedi
Ukuphela kwendlela yokuyekisa ukusebenza kwe-Thola umsebenzi wami we-iPhone ngephasiwedi ye-akhawunti yethu ye-iCloud, ngaphandle kwalapho ngeke kwenzeke ukukwenza, ngoba kuyinqubo ebalulekile ukukwazi ukuqedela inqubo. Uma kungasebenzi ngaphandle kwephasiwedi ye-akhawunti yethu ye-iCloud, ukuphepha okunikezwa yilo msebenzi bekungeke kube nomqondo.
Khubaza ukuthola i-iPhone yami kusuka ku-iCloud
Uma singenayo idivayisi yethu ngokomzimba ukuze sikwazi ukucisha umsebenzi we-Find my iPhone, ukuphela kwendlela yokwenza kanjalo ngokusebenzisa iwebhusayithi icloud.com, ngenza inqubo efanayo naleyo engiyibeke ngenhla esigabeni Khubaza i-iPhone yami uma ingavuli.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungayicisha kanjani i-iPhone yami
Kuhle ngithenge i-iPhone 6 yesibili ebengiyisebenzisa kuphela izinsuku ezimbalwa ngoba bengiyisebenzisa ne-id ye-icloud yomnikazi wangaphambilini futhi ngiyibuyisile ifoni yasefekthri manje isibuza i-apple id lapho umuntu ethenga ifoni Wanginika i-imeyili kuphela kepha akazange anginike nephasiwedi. Ngubani ongisizayo, angifuni ukulahlekelwa yimali yami, umuntu ongithengisele yena ushiye izwe futhi anginakho ukuxhumana naye.
Akunginiki inketho yokukhubaza umsebenzi WOKUTHOLA I-IPHONE YAMI ku-Cloud.com, ngendlela ekhonjiswe lapha.
kwenzeka okufanayo kimi 🙁
Nginenkinga, i-iphone yami ayisebenzi futhi lapho ngifaka i-icloud ikhasi lingibuza imininingwane yami bese kuba ikhodi yokuqinisekisa, kufanele ngiyibone kanjani uma ngikwazi ukuyisebenzisa?
Noma i-iPhone X, noma i-Galaxy S9 noma i-Galaxy Note 9. Izinzwa zeminwe ezingaphansi kwesikrini azimelani
Sebenzisa ngokunenzuzo ukunikezwa kwe-eBay nge-Super Weekend kule mpelasonto